Khilaafka U Dhaxeeya Hogaanka Dowlada Oo Sii Xoogeystay. – Bogga Calamada.com
Khilaafka U Dhaxeeya Hogaanka Dowlada Oo Sii Xoogeystay.
Waxaa sii xoogeystay khilaafka ka dhex taagan hogaanka dowlada Ridada,iyadoona khilaafkan uu qarka u saaranyahay inuu isku badalo gacan ka hadal.
Gudoomiyaha golaha dhawaaqiida dowlada Ridada iyo R/wasaare Murtad Cali Kheyre ayuu khilaafka xoogiisa u dhaxeeyaa,iyadoona Murtad Farmaajo uu la jiro R/wasaaraha waana khilaaf aad u xoogan oo xilligan ka dhextaagan hogaanka dowlada Ridada.
Khilaafka ayaa gaaray in maleeshiyaat hubeysan oo taageersan R/wasaaraha ay xoog kula wareegaan xaruntii Baarlamaanka ee uu ku shaqeynayay Murtad Jawaari taasi oo sii xoojisay khilaafka taagan.
Muxamed Cusmaan Jawaari ayaa Xasan Cali Kheyre ku eedeeyay inuu soo diray maleeshiyaatka la wareegay xarunta Baalamaanka,waxeyna xildhibaanada la kala safteen gudoomiyaha baarlamaanka iyo R/wasaaraha.
Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ayaa doonaya in xilka laga qaado gudoomiyaha Baarlamaanka,iyadoona Jawaari oo diidan inuu xilka baneeyo uu ku goodiyay hadii xilka laga tagayo ay ka wada tagayaan isaga iyo R/wasaaraha.
Dowlada Ridada ayaa shaqo maalmeed ka dhigatay khilaaf dhex dooda ah iyo iska hor’imaad joogta ah oo dhex mara maleeshiyaatka maamulka Farmaajo.